Cilmi-baaris la sameeyay oo lagu ogaaday in ay jiraan faa’iidooyin laga helo la hadlidda qof aadan horay u aqoonnin | Somali National Television - sntv.so
Home MAQAALLO Cilmi-baaris la sameeyay oo lagu ogaaday in ay jiraan faa’iidooyin laga helo...
Cilmi-baaris la sameeyay oo lagu ogaaday in ay jiraan faa’iidooyin laga helo la hadlidda qof aadan horay u aqoonnin
Inta badan dadku waxay waqtigooda qaataan iyaga oo ay ku hareereysan yihiin dad aysan aqoonnin ,haddii ay ahaan laheyd xilliga ay shaqadooda ku sii socdaan ,xilliga ay dukaameysanayaan ama xilliga ay joogaan meelaha lagu tamashleeyo.
Iyada oo ay sidaasi tahay, haddana dad badani ma sameeyaan is -dhexgal iyaga oo aaminsan in isu soo dhawaansho dhex mara dad aan horay isu aqoonnin uusan farxad gelineyn labada dhinac.
Aaminaaddaasi ma noqoneyso mid lagu marmarsiyoon karo, sida ay sheegeen aqoon yahannada cilmi baaristan sameeyay oo kala ah : 1) bare- sare nikolaas ibli ,oo ka tirsan jaamacadda shikaago (chicago) 2)iyo bare-sare juuliyaana, oo ka tirsan jaamacadda kalifoorniya.
Cilmi baaristan ayaa lagu sheegay in inta badan dadku ay yareystaan saameynta togan ee la xiriiridda dadka kale ay leedahay.
Faa’iidooyinka la ogaaday in laga helo la hadlidda qof aadan horay u aqoonnin waxaa ka mid ah.
1) la hadlidda qof kugu cusub oo aad wada safreysaan waxa ay socdaalka ka dhigtaa mid raaxo leh. 2) la hadlidda qof aadan aqoonnin waxaa laga helaa fikrado iyo waayo aragnimo.
Gebagebidii ,maadaama aadanuhu uu yahay noole bulshay ah, la xiriiridda dadka kale waxay farxad gelisaa qofka, halka kalinnimadu ay u keento qofka khatar caafimaad oo u dhiganta tan laga dhaxlo sigaar cabista iyo barruurta oo jirka ku badata.
Xiriirka togan ee bulsho waxaa loo arkaa mid ka mid ah furayaasha farxadda iyo xitaa inuu ka muhiimsan yahay xaddiga dakhliga ee qofka soo gala.
Xigasho: waxaan qormadan ka soo xigannay laanta afka Carabiga ee bii bii sii (BBC)
Tarjumaadda: waxaa tarjumay Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed.
Previous articleAgaasimaha Madaxtooyada Qaranka oo la kulmay Danjireyaal fadhigoodu yahay Muqdisho
Next articleWasaaradda arrimaha Gudaha XFS oo War-saxaafadeed ka soo saartay Doorashada Galmudug